Sida Loo Sameeyo Lacag Sawir Sawireedka Kartoonada 2021
Bogga ugu weyn Sida Loo Sameeyo Lacag Sawir Sawireedka Kartoonada 2021
Haddii aad ku raaxaysato sawir gacmeedyada oo aad leedahay kartida, waa inaad tixgelisaa inaad raadsato xirfad-kartoon ahaan.
Kartoonistayaashu waxay abuuraan majaajillo iyo kartoonno daabacaadyo kala duwan, oo ay ku jiraan wargeysyada, joornaalada, buugaagta, iyo filimada firfircoon.
Si aad tan u samayso nolol maalmeed, waxaad u baahan doontaa dadaal, karti, adkaysi, xamaasad, iyo dulqaad. Nasiib wanaag, waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay dadka jecel sawir gacmeedyada ama majaajilada si ay lacag u helaan. Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid ah hababka ugu waxtarka badan uguna dhakhsaha badan ee lagu kasbado lacag adoo sawiraya sawir gacmeedyo.
Waa Kuma Kartoonistaha?
Kartoonistaha, oo sidoo kale loo yaqaano majaajiliiste majaajillo ah, farshaxan buug majaajillo ah, farshaxan sheeko garaaf ah, ama sawir-qaade buug majaajillo ah, waa farshaxan-yaqaan muuqaal ah oo ku takhasusay soo saarista kartoonnada ama buugaagta majaajilada ah (Sawirro xidhiidhsan). Farshaxanada maamula dhammaan qaybaha shaqada waxaa loo kala saaraa sawir-gacmeedyo, sidoo kale kuwa wax ku darsada qayb ka mid ah shaqada.
Kartoonistayaashu waxay u shaqeeyaan qaabab badan, oo ay ku jiraan buug-yaro, majaajilo, buugaag majaajillo ah, kartoonno tafatir ah, sheeko-yaqaanno garaaf ah, buug-gacmeedyo, kartoonno gag-gaaban, sawir-gacmeedyo, boodhadh sheeko-qoraal ah, boodhadhyo, teesyo, buugaag, xayaysiisyo, kaadhadhka salaanta, majaladaha, wargeysyada, iyo ciyaarta fiidiyowga baakadaha, si loo magacaabo dhowr.
Maxay ku qaadanaysaa inaad noqoto Kartoonist?
Kuwa soo socda waa tillaabooyinka aad ku noqon lahayd sawir-qaade:
1. Difaac oo Xooji Caqiidadaada
Tani, fikradayda, waa qodobka ugu muhiimsan. Waxayna u muuqataa in ay iska caddahay.
Tixgeli dhibaato, ama ka shaqeyso shaqo caadi ah si aad u quudiso qoyskaaga, u bixiso amaahdaada, iyo wixii la mid ah. Raacitaanka riyooyinkeena ma fududa.
Si kastaba ha ahaatee, ka fakar oo is waydii naftaada, "Tani run ahaantii ma hammigayga?" "Maxaan rabaa inaan noqdo markaan weynaado?" Haddii aad ku jawaabtay haa, ka dibna sii wad in rabitaankaaga uu rumeeyo.
2. Wax baro oo akhri
Tani waa shay kale oo muhiim ah in la tixgeliyo haddii aad runtii rabto inaad horumariso qof ahaan iyo sawir-qaade xirfad leh. Xeerarka dahabiga ah waxaa ka mid ah in aad u fiirsato nolosha iyo wax kasta oo inagu xeeran.
Natiijo ahaan, waxaad heli doontaa naftaada wax akhris, socdaal (haddii aad fursad u haysato), inaad leedahay waayo-aragnimada saxda ah, inaad wax badan ka barato waxa adduunka ka socda, iyo, ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, ballaarinta aragtidaada si aad ugu darto noocyo badan. sida ugu macquulsan: majaajilada, filimada, buugaagta, iyo animation.
Waxaas oo dhami waxay kaa caawin doonaan inaad ballaariso ilahaaga waxyiga iyo horumarinta shaqadaada, iyo sidoo kale xirfadaada.
3. Bilaw inaad sawirto Waxyaabaha dhabta ah
Qaadashada maaddooyinka dhabta ah waxay lagama maarmaan u tahay barashada sawir-qaadista. Tani waxay lagama maarmaan u tahay sawirka qaab kasta, oo ay ku jiraan majaajilada iyo sawirada kartoonnada, iyo sidoo kale nooc kasta oo kale oo farshaxan casri ah.
Tani waa sababta oo ah haddii aad nuqul ka sameysid qaab isku dhafan oo jira kaas oo ka dhashay dib u tarjumida xaqiiqada, sumcaddaada xirfadeed ayaa si weyn u dhaawacmi doonta, fankaaguna ma noqon doono mid shakhsi ah, laakiin wuxuu noqon doonaa nuqul liita oo qof kale ah.
4. Isticmaal Blog si aad u horumariso shaqadaada
Samee blog leh WordPress. Waxaa jira dhowr Mawduucyo wanaagsan oo la heli karo, labadaba bilaash iyo kuwa qaali ah, oo aad isticmaali karto si aad u muujiso faylalkaaga.
WooThemes waa cajiib haddii aad rabto inaad abuurto baloog xirfad-yaqaan ah ama aad si fudud u rabto inaad ka soo baxdo dadka badan ee qaab-dhismeedka WordPress ee caadiga ah. Warka cusub waa magaca mawduuca WooThemes blog ee aan isticmaalo. Waxaan si adag u soo jeedinayaa iyaga, iyo mawduucyada ay si fiican u qiimeeyaan lacagta.
5. Baro Farsamada Rinjiyeynta
Haddii aad rabto inaad midabayso shaqadaada, haddii aad rabto inaad noqoto sawir-gacmeed ama sawir-qaade, waxaad u baahan tahay inaad barato ugu yaraan hal farsamo rinjiyeynta gacanta ka hor intaadan isticmaalin barnaamij kasta oo midabaynta dhijitaalka ah.
Dabcan, sawiradu had iyo jeer waa talaabada ugu horeysa, iyo haddii aad rabto inaad naftaada u muujiso naqshadeeye, tani mar walba lagama maarmaan ma aha. Tani sidoo kale looma baahna haddii aad rabto inaad la shaqeyso midab-yaqaannada ama qorayaasha sheeko-yaqaannada, sheeko-yaqaannada, ama qorayaasha buug-gacmeedka si aad u gaarto riyadaada.
Haddii aad wali rabto in aad midabkaaga u isticmaasho shaqadaada ama aad xitaa naftaada u soo jeediso sida midabeeyaha oo kaliya, oo waa inaad ka bilowdaa xoq sababtoo ah waligaa ma aadan tegin dugsiga farshaxanka, qaado koorsada sawir-gacmeedka ama rinjiyeynta iyo, marka aad ugu yaraan barato. Mid ka mid ah farsamada midabaynta dhabta ah, waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho Photoshop ama barnaamijyo la mid ah si ixtiraam leh.
6. Isticmaal Khayraadka Dijital ah
Kumbiyuutarka iyo internetka ayaa nolosheenna soo galay, iyaga oo fududeeyay hawlo badan.
Garaafyada, animation, iyo midabaynta dhijitaalka ah ayaa ah wax yar oo ka mid ah waxyaabaha aad ku qabsan karto kumbuyuutarkaaga.
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha barnaamijyada caanka ah, kuwa bilaashka ah iyo kuwa lacag-bixinta ahba, kuwaas oo laga yaabo inay ku daneeyaan:
Adobe Photoshop: http://www.adobe.com/photoshop/; - Dib u eegista farshaxanka: http://www.artweaver.de/download-en/
7. Ku qiimee shaqadaada ka dhanka ah kuwa kale
Waa inaadan waligaa joojin inaad wax ka barato shaqada dadka kale, ma aha oo kaliya dantaada.
Dabcan, tani macnaheedu maahan koobiyeynta, laakiin waxay ku xisaabtamaysaa shaqada dadka kale, barashada aqoonsiga iyo ixtiraamka fanaaniinta iyo xirfadlayaasha qiimaha leh, iyo la macaamilka iyaga, haddii aan si shakhsi ah loo aqoonin.
Had iyo jeer is barbar dhig kuwa kale, baro inaad aqoonsato fannaaniinta qiimaha leh, oo kalsooni ku qabo inaad bixiso dhaleecayn wax dhisaysa.
ARAG SIDOO KALE: 20 TILMAAMAHA UGU FIICAN TILMAAMAHA TALLOOYINKA QOYSKA 2021
Sida Loo Sameeyo Lacag Sawir Kartoon
Halkan waxaa ah siyaabo aad lacag ku samayn karto adigoo sawiraya sawir gacmeedyo:
1. Kartuun ku salaysan internetka
Waxaa jira hal milyan oo habab oo kala duwan si sawir-gacmeedyadaada loogu daabaco internetka, laakiin dhammaantood lacag kuma samayn doonaan, markaa ka digtoonow sida aad u wajahdo warbaahintan. Bilaabida blog waa wax ay tahay inaad sameyso, haddii ay lacag kuu keento.
Maxay tani kuu sheegaysaa? Inta badan sawir-gacmeedyada guuleysta waxay ogaadeen inay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah shirkadooda. Waxyaabaha cajiibka ah ee ku saabsan blogyada ayaa ah in loo isticmaali karo in lagu soo saaro lacag iyada oo la dhejinayo xayeysiis iyaga.
Dad badan ayaa maciishad wanaagsan ka samaysta blog-ga la ganacsado, laakiin waxa la qabsaday ayaa ah inaad u baahan doonto gaadiid badan ka hor intaadan filanayn inaad sidan lacag ku samayso.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad si habboon u dejiso joogitaankaaga kartoonka Internetka, waxaa laga yaabaa inaadan waligaa u baahnayn inaad isticmaasho mid ka mid ah xulashooyinka daabacaadda ee soo socda. Haddii ay dhibaato kaa haysato helitaanka lacag si ay u socoto, suuqa kaadhka salaanta waxay noqon kartaa meel wanaagsan oo aad ka bilaabi karto sidii rookie.
Akhri ALSO: 17 Fikradaha Habeenkii Ciyaarta Runtii Waa Madadaalo
2. Kaararka Salaan ee Kartoon
Sanado badan, shirkadaha kaarka salaanta waxa ay ilo dhaqaale oo la isku halayn karo u ahaa qorayaasha iyo fannaaniinta hamiga leh. Tani waa hab aad u fiican oo lagu kabo dakhligaaga iyadoo sidoo kale la samaynayo caddaynta daabacaada.
Si aad u bilawdo, ka raadi daabacayaasha kaadhka Salaan online ama hel buug ay ku jiraan macluumaadka suuqa farshaxanka oo baro shurudaha soo gudbinta shirkad kasta si aad u barato sida loo soo gudbiyo shaqadaada.
Haddii aad u malaynayso in tani ay tahay wax aad xiisaynayso, waxaad xitaa samaysan kartaa shirkad kaadhka salaanta iyo is-daabacid.
Haddii rajada samaynta kartoonka dhalashadiisa oo kale ay kaa ilmaysiinayso, qaybta xayaysiisku waxa laga yaabaa inay ku siiso fursado sawir-gacmeed oo cajiib ah isla daaradaada dambe.
Akhri ALSO: 10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Laga Helo Maansada Lacag 2021
3. Xayeysiisyada kartoonnada
Si joogto ah ayaa lagugu soo weeraray xayaysiisyo haddii aad la mid tahay dadka intiisa badan maalmahan. Milkiilayaasha ganacsigu waa inay si fudud u xayeysiiyaan si ay u helaan macaamiisha, taas oo ku siinaysa fursad cajiib ah.
Indhaha ha furto marka aad gudanayso hawl maalmeedkaaga. Aynu ka fikirno inaad iska tuurto dhaqida qallalan ee nadiifinta qalalan oo aynu ogaano in calaamaddoodu ay caajis tahay ama si liidata loo sameeyay… u soo bandhig si aad u sawirto mid ka wanaagsan iyaga.
Dabadeed, waxaad tidhaahdaa, maalinta xigta, markaad ilmahaaga geyso dhakhtarka ilkaha, waxay ku siinayaan buug-yaraha si aad u barato carruurtaada sida loo daryeelo ilkahooda, buug-yaraha ayaa ah mid si liidata loo qaabeeyey oo keenaya baaraha patent-ka. Waxaad markaas u soo bandhigi kartaa inaad ka caawiso abuurista mid leh sawir-gacmeedyo carruurta u saaxiib ah. Xirfaddan, doorashadu waxay ku dhow yihiin kuwo aan xadidnayn, oo haddii aad si fiican u hesho, dakhligaagu cirka ayuu kor u kici karaa.
Haddii aadan xiisayneynin shaqada ganacsiga, waxaa sidoo kale jira warshadaha sawir-qaadista ee buugaagta iyo majaladda si aad u tixgeliso.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto 10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Lacag Laga Helo eBooks -ka 2021 -ka
4. Sawirada Buugaagta Kartoonka iyo Joornaallada
Meesha ugu fiican ee buugaagta iyo joornaalka sawirada waa, dabcan, buugaagta carruurta iyo majaladaha, in kasta oo ay jiraan qaybo kale oo dhawr ah oo inta badan ku jira kartoonnada.
Sababtoo ah u shaqaynta daabacayaasha waaweyn waxay noqon kartaa mid aad loo tartamo, waa inaad si wax ku ool ah uga faa'iidaysato male-awaalkaaga markaad u soo dhowaanayso suuqan.
Raadi daabacayaal yaryar si aad cagtaada u gasho, iyo daabacayaasha e-zine ee internetka ayaa sidoo kale noqon kara meel fiican oo laga bilaabo.
Meel kale oo la eego waa shirkadaha iskood wax u daabaca; Runtii waa wax lala yaabo inta qof ee ku jirta is-daabacaadda, weligeedna taariikhda lama soo marin erayo intaas le’eg oo la qoray, haddana inta badan shakhsiyaadka daabaca erayadaas oo dhan ma sawiran karaan si ay naftooda u badbaadiyaan.
Waxaa laga yaabaa inaadan xitaa u baahnayn inaad ogaato sida loo sawiro kartoonnada si aad u bilowdo ganacsi kartoon ah; Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa awooda si aad u qiimeyso nooca kartoonada ay rabaan macaamiishaadu ka bacdina ay aqoonsadaan sawir-gacmeedyada kuwaas oo bixin kara.
Eeg 20 Xirfadaha Ugu Faa'idada Badan In 2021 Mushahar Lagu Baro
Immisa ayuu qaataa Kartoonistaha?
Xafiiska Tirakoobka Shaqaaluhu ma hayo xog cad oo ku saabsan sawir-gacmeedka shaqo gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, ilaha qaarkood waxay sheeganayaan in magdhowga sawir-gacmeedka sanadlaha ahi u dhexeeyo $30,000 ilaa $60,000. Si kastaba ha ahaatee, sawir-gacmeedyo badan ma helaan lacag ku filan oo ay naftooda ku maareeyaan.
Kartuunigu waa farshaxanka abuurista sawir gacmeedyo weli socda kuwaas oo inta badan loogu talagalay in lagu maadsado. Daabacadaha, sida majaladaha iyo wargeysyada, iyo sidoo kale daabacaadaha onlaynka ah, sida baloogyada iyo mareegaha, inta badan waxay muujiyaan kartoonadan.
Sawir gacmeedyada qaar ayaa ka kooban hal sawir, halka qaar kalena ay ka samaysan yihiin sawirro badan. Xarig majaajillo ah waa erey loo isticmaalo in lagu qeexo nooca animation. Buuga garaafku waa ururinta kartoonno badan.
Kartuunku wuxuu noqon karaa mid casri ah ama mid aad u fudud, iyadoo ku xiran dhageystayaasha loogu talagalay. Kartuunada siyaasadeed, tusaale ahaan, waxa laga yaabaa in ay ku tiirsanaadaan kaftan qallalan iyo kaftan daahsoon, waxaana sida caadiga ah loogu talagalay in lagu muujiyo xaalad siyaasadeed oo ka sii daran qaab qosol leh.
Taa beddelkeeda, waxay u badan tahay inay shaqeeyaan "shaqo maalmeed" si ay u kabaan dakhligooda. Dhanka kale, sawir-gacmeedyada nasiibka u yeeshay in sawir-gacmeedkooda ama xariijinta majaajilada la isku dhejiyo ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay helaan nolol macquul ah.
Ogsoonow in mushaharka sawir-qaadaha ee saacaddii ee Maraykanka ay tahay qiyaastii $14.33.
FAQS Ku Saabsan Sida Loo Sameeyo Lacag Sawir Kartoon
Magdhowga sawir gacmeedka sanadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa $30,000 ilaa $60,000.
Waa kuma sawir-qaade?
Kartoonistaha, oo sidoo kale loo yaqaano majaajiliiste majaajillo ah, farshaxan buug majaajillo ah, farshaxan sheeko-yaqaan ah, ama sawir-qaade buug majaajillo ah, waa farshaxan-yaqaan muuqaal ah oo ku takhasusay soo saarista kartoonnada ama buugaagta majaajilada ah.
Intee in le'eg ayay qaadataa in aad noqoto sawir-qaade?
Shahaadada ka sokow, loo-shaqeeyayaasha badankood waxay door bidaan musharraxiinta leh ugu yaraan laba sano oo waayo-aragnimo ah warshadaha jagooyinka dhexe.
Waxaa jira hab ay jirto rabitaan, laakiin dhammaan fursadaha la heli karo adduunka maanta, "jidka" waa inuusan noqon mid aad u adag.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo sawir-gacmeed ahaan waa dareen wanaagsan oo kaftan ah iyo rabitaan ah inaad sawirto kartoonada. Xataa uma baahnid in aad noqoto fannaan cajiib ah si aad u noqoto sawir-qaade; Xirfadaha sawir-qaadista ee xooggan weligood shuruud ma noqon.
Waxa kale oo jira qalabyo badan oo aad u fiican oo la heli karo si ay kaaga caawiyaan barashada sawirka. Haddii aad tahay qof si farshaxanimo leh loolan adag yahay, waxaad ka faa'iidaysan kartaa dib u eegista buugaagta sawir-gacmeedka iyo software-ka si aad u daaha ka qaaddo qaar ka mid ah agabyada ugu waaweyn si aad u bilowdo.
Sida Loo Iibsado Guri Aan Lacag Lahayn 2021: 7 Siyaabood Oo Sharci Ah
15 Shaqada Guriga Shaqooyinka California | Shaqaalaynta Hadda
Maqaalkan, waxaan ku qori doonnaa shaqooyinka shaqooyinka guriga ee California. Shaqooyinka halkan ku qoran ayaa…
Qofna ma iibsado badeecad markii ugu horreysay isagoo aan hubin waxa isticmaaleyaasha kale ay ka yiraahdeen badeecadda.…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Fallout 4 | Tilmaamaha Buuxa ee 2022
Waxaan kuu sheegi karaa inay jiraan siyaabo badan oo degdeg ah oo aad lacag uga samayn karto Fallout…
Dib -u -eegista Cashcrate 2021: Lacagtii Ugu Dambeysay Lacag Ka Samee Online?
Sababta ugu muhiimsan ee dib u eegista, gaar ahaan mid ka mid ah ayaa muhiim ah sababtoo ah wax badankeenu ma caawin karno…